Yenziwe ngentsimbi eshayinayo Glass uqinisa uqinisa uqinisa Glass Izibiyeli zeBalusters behambisa Post / Balcony / Terrace / Handrail Banister / Pool
Ngokusetyenziswa okulula kweephuli zeglasi zephuli, ungazisa isibheno sanamhlanje echibini lakho okanye kwindawo engasemva kwendlu.
Gqibezela iphuli yakho okanye ezinye iindawo zangaphandle ngocingo lweGlasi olungenasiphelo.
Uyilelwe ukufakela ngokwakho ngokulula, imingxunya yokomba kwiglasi ayifuneki, vele ukhwelise ispigot kwaye ugqibile.
Iglasi ihleli endaweni yayo kunye nenkqubo entsha yokukhuhlana, apho ibanjiswe ngumkhono werabha wespigot.
Ifanelekile kwiglasi yokuqubha yeglasi, igadi yeglasi, ibalustrade, izitepsi njalo njalo
Ngokudityaniswa okubunjiweyo, i-spigots zethu zinezibonelelo zamandla aphezulu kunye nokhuseleko
Akukho migodi ifunekayo kwiiphaneli zeglasi. Izikere kunye nezembozo zepleyiti zibandakanyiwe, awudingi ukuthenga ngokwahlukileyo kwenye indawo.
Ifanelekile kwiglasi yeglasi 8mm, 10mm, 12mm, 15mm okanye 5/16 intshi, 3/8 intshi, 1/2 intshi, 9/16 intshi
Ukufakwa ngokulula-kugxilwe kwi-DIY
I-JKL yeGlasi yePost Post, eyenziwe ngumgangatho ophezulu we-stainless steel 304, omelele kakhulu kwaye womelele kunentsimbi eqhelekileyo okanye i-aluminium alloy, ukumelana okungcono kurusi, umhlwa kunye nokuqaqamba.
Itekhnoloji ethe xhaxhe ngokugqitywa kwesatin, yanamhlanje kunye nobuhle.
Uyilo olulula noluthembekileyo, imingxunya yokomba iyafuneka ekubambeni okukhuselekileyo kwiiphaneli zeglasi
Ifanele ipaneli yeglasi eyi-8-12mm, ufakelo olulula
ilungile kwiglasi yokuqubha yeglasi, igadi yeglasi, ibalustrade, izitepsi njalo njalo
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo 316 Grade Wall Staircase Handrail Bracket for Flat Surface Square Rectangle Top Rail Tube, Satin Finish
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo 316 grade, satin entanjeni
Umnini Flexible, ungadibanisa engile ezahlukeneyo handrail
3 imingxunya amandla ngakumbi kunye nenkxaso
Ukusetyenziswa ngentsimbi ejikelezileyo okanye ngomthi ongaphezulu kaloliwe
Izinyuko kwizinyuko Handrail kwizibuko
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo Handrail isibiyeli, Satin Nickel elihamba kwizibiyeli.
Izibiyeli zokubamba ngesandla kwizitepsi zemingxunya yamandla ngakumbi kunye nenkxaso ngesigqubuthelo esisangqa.
Ububanzi beplate yePlati: 48mm; Ipleyiti yokubamba ngesandla 48 x 32mm; Ukukhuselwa kwindonga: 60mm; Ifanelekile iityhubhu ezingama-45-60mm.
Handrail for metal ngeenxa zonke okanye iinkuni kaloliwe phezulu.
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo 316 Grade Wall Staircase Handrail Bracket for Flat Surface Square Rectangle Top Rail Tube
Ogqibeleleyo udonga zokubambelela imvelaphi inyuselwa khona
Iqinile kwinto enye
Ukusetyenziswa ngesinyithi esicaba okanye ngomthi ongaphezulu kaloliwe
IGLASI IIKLAMPU-8PCS zeglasi yamasango, Ilungele i-6-8mm yeGlasi.
IZINTO EZIPHAKAMILEYO NGEXABISO LOKUGQIBELA-Yenza i-304 ye-Stainless, i-Strong ngakumbi kwaye iQinisekile, eyi-Rustproof, engenawoManzi kunye ne-Heat-Resistant, ekungekho lula ukuyonakalisa.
IYAJIKELEKA-NgeeNdawo zeRabha kunye ne-Micro-adjusting Screw, Ifanelekile kwi-8-10mm Ukutyeba kweGlasi.
KULULA UKUFAKA - Iza kunye neHexagon Diver, Kulula ukuyikhulula okanye ukuQinisa izikrufu.
UKHUSELEKILE-Igubu yerabha inokuQiniseka kwaye ikhuseleke ngokuKhuselekileyo ekulungiseni iglasi, ilunge ngokuLungisa iglasi yeBalustrade, Izinyuko, Handrail, njl.
Igama leMveliso: Uzbekistan Compass Mall
Stainless Handrail Ukubetheka elungisa isibiyeli
Ukucaciswa kwegama leMveliso Handrail Railing Fixing bracket Surface Gqiba i-hairline / Matt Umbala wokuqala wombala / isilivere / umbala wePVD Umbala we-SS304 / SS316 / SS316L Dimension (mm) 150 * 18 * 30 Certificate ISO9001: 2015 Package yezoThutho: Iiplastiki / iibhola zebhola zebhokisi + iibhokisi + iibhokisi okanye ngokwesicelo sabathengi Isibonelelo: I-OEM kunye ne-ODM enokusebenziseka: I-Baluster Constrcution, iglasi yokuDibanisa kunye ne-handrail. for 38.1,42.4,48.3,50.8,63.5mm ngeenxa zonke umbhobho Isityalo sethu O ...
IKarl Lagerfeld Ihotele, eMacau
Nkqo Handrail izibiyeli, Stainless ilifti Handrail, Enyangweni Handrail isibiyeli, Zokubambelela, Stainless Handrail, Plate yeSiseko seZandla,